जनमुखी लोकतन्त्रको जनअपे क्षा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / जनमुखी लोकतन्त्रको जनअपे क्षा
जनमुखी लोकतन्त्रको जनअपे क्षा
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय February 20, 2018	0 99 Views
हिजो मात्रै ६८ औ ं प्रजातन्त्र दिवसको औ पचारिकता सकिएको छ । १०४ वर्ष लामो राणाशासनको अन्त्यको लागि थालिएको क्रान्ति सम्पन्न भएको खुशियालीस् वरुप फागुन ७ गते लाई हामीले प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौ ं । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि पटक–पटक निरंकुशतन्त्र हावी हुँदै आएको पीडा ने पाली जनताले भो ग्दै आएका छन् । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइ“पछि २०७२ सालमा मात्रै संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त हुन सक्यो  । यसरी राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि ने पाली जनताले सात दशक लामो संघर्ष गर्नुप¥यो  । शहीदको बलिदान र जनताको लामो संघर्षको प्रतिफलस् वरुप यतिबे ला मुलुक संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवे श गरे को छ ।
६८ औ ं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा ने पालको संविधान २०७२ को जगमा टे के र मुलुकलाई राजनीतिक स् िथरता र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने संकल्प हामी सबै ले गर्न सक्नुपर्छ । अब मुलुकमा कुनै प्रकारको निरंकुशतन्त्रको पुनरो दय हुन नसको स् र मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हो स् भन्ने आम जनताको चाहना छ । भर्खरै मात्र तीनवटै तह स् थानीय, प्रदे श र संघको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइ सरकारसमे त गठन भइसके को ले अब जनताले परिवर्तनको अनुभूति गनेर् गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारहरु असफल बन्ने अवस् थामा मुलुक फे रि पछाडि फर्कने खतरा आउन सक्छ । अहिले को ने तृत्व वर्गले अब आउने चुनौ तीको सामना गर्नका लागि आफ्नो क्षमता र इमानदारिता दे खाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले सम्म प्रजातन्त्र, लो कतन्त्र र गणतन्त्रका धे रै कुरा भए । तर त्यो अझै जनताको घर आँगनमा पुग्न सके को छै न । जनताले न त्यसको अनुभूति गरे का छन् न त कुनै प्रतिफल नै प्राप्त गरे का छन् । अहिले पनि बहुसंख्यक जनताको ठूलो हिस् साले गरिवी, अभाव र बे रो जगारीको पीडा भो गिरहे को छ । दे शभित्र रो जगारीको अवसर नहुँदा लाखौ ं युवाहरु विदे शिएका छन् । अहिले पनि सर्वसाधारण जनताले लो कतन्त्र गणतन्त्र आएको अनुभव गर्न पाएका छै नन् । अहिले पनि गरिखाने वर्गको जिन्दगानी धे रै असहज र पीडादायी छ । जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याएर आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष हासिल गर्न सकिन्न । अबको यात्रा यस दिशातर्फ लक्षित हुन जरुरी छ ।
ने पाली जनता हिजो राजाका प्रजा थिए । अहिले गणतान्त्रिक ने पालका नागरिक बन्न पाएका छन् । तर ने पाली राजनीतिमा आफूलाई छो टे –बडे “राजा” ठान्ने गलत प्रवृत्ति दे खा पर्न थालिसके को छ । यो प्रवृत्ति “राणा”, “राजा” वा पञ्चहरुकै विरासदको रुपमा झांगिने , मौ लाउने खतरा छ । एउटा ने तालाई आफू बाँच्दासम्म सांसद, मन्त्री वा कुनै न कुनै लाभको पदमा बसिराख्नुपनेर् बाध्यता किन छ ? यस् तो परिस् िथतिमा लो कतन्त्र वा गणतन्त्र आम जनताका लागि हो इन, सीमित ने ताहरुका लागि मात्र हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रतिफल आम जनतासम्म, सुदूर ग्रामीण बस् तीसम्म पु¥याउन सकिएन भने जनमुखी लो कतन्त्रको जनअपे क्षा पूरा गर्न सकिने छै न । यस् तो बे ला मनाइने दिवसहरु औ पचारिकतामा सीमित रहने छन् ।
Previous: समाजवादी शिक्षा, के सम्भव छ ?
Next: सन्तान पुरस्कृत हुँदा अभिभावकमा खुशी
जलविद्युतमा जनताको लगानी
विकास योजनामा नियमित अनुगमनको खाँचो